Ikhwalithi ephakeme Ukushisa ukubeka ipulangwe yocaram China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Advanced Ceramic Plate > I-Industrial Ceramic Plate > Ikhwalithi ephakeme Ukushisa ukubeka ipulangwe yocaram
I-Model No.: JH.SC.012
Ukushisa ukucwilisa ipulangwe yoceramic kwenziwa nge-95%, 99% noma i-99.5% ye-aluminium oxide yoceramics, ingakhiwa ngokucindezela okushisa okuzenzakalelayo noma ukukhishwa kwe-tape ngomzimba obukhulu we-ceramic.
Siyakwazi ukwakha ububanzi bekharamu yokushisa okushisa nge-ceramic njengendlela yokudweba kwamakhasimende kanye nokucaciswa, ngezinye izikhathi, sizosebenzisa ezinye izindlela zokukhiqiza ngokucacile ukuze sibhekane nalezi zingqimba ze-ceramic, njengokugaya okuhle, ukusika ngokucacile nokusika. Kungakhathaliseki ukuthi yiyiphi iphrojekthi ye-prototyping noma ilahlekelwa phansi. Zonke izibhodi ze-ceramic esazenzile zinokuvumelana okufanayo.
Uma ufuna ukushisa okufake ipulangwe yoceramic. Sicela ukhululeke ukuxhumana nathi. Sizozama konke esingakwenza ukuze sikunikeze ikhwalithi yekhwalithi kanye nensizakalo njengoba kulindelwe.